Sababtoo ah koritaanka degdegga ah ee dalabka dalabka sawirka dareeraha CIS, maaraynta maaraynta awoodda PMIC, qashinka aqoonsiga faraha, Chip Bluetooth, xusuusta khaaska ah, iwm., Amarrada 8-inji canjeero ayaa kulul. Sida laga soo xigtay Securities Times, iyada oo si tartiib tartiib ah loo bilaabay 5G taleefannada gacanta, baahida ...
Kooxda Brocade ayaa soo bandhigtay Carwada Shiinaha iyo Bartamaha iyo Bariga Yurub Carwada Carwada iyo Ganacsiga iyo Chengdu Special Cloud Fair
Bishii Oktoobar 28-keedii, Chengdu wuxuu si guul leh u qabtay Carwada Shiinaha iyo Bartamaha iyo Bariga Yurub Carwada Carwada iyo Ganacsiga Chengdu iyo Carwada Gaarka ah ee Chengdu. Dhacdadani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah 2020 Shiinaha-Yurub International Trade Digital Exhibiti ...
Ka dib markii uu kumbiyuutar ama TV ku xirayo fiilada HDMI, TV-gu ma jawaabo
1. Fadlan hubi haddii kanaalka aqbalka ee signalka TV-ga uu ku habboon yahay "HDMI input", marka hore u wareeji dejinta TV-ga. Dariiqa: Meel-ku-xirnaanta-isha isha-is-dhexgalka, ku xulo sida ku xusan fiilada HDMI iyo telefishanka (waxaa jiri kara 1-5 noocyo kala duwan). 2. Guud ahaan, kumbuyuutarka ayaa cilado ku ah separ ...